IGemini kunye neGemini-Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Gemini
Gemini kunye neGemini
Ukuhambelana kweGemini kunye neGemini kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
IGemini kunye neGeminiUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Xa sicinga ngeeGemini ezimbini kubudlelwane bezesondo, kulungile ukuba sihleka kancinci. Umfanekiso oza engqondweni unokuba ngumfanekiso wabantu ababini abanobuntu obuhlukeneyo, bezama ukulala ngesondo ngokubetha iintloko zabo kunye nokuthetha ngaxeshanye. Nangona ngokuqinisekileyo baya kuba nolwazi oluninzi malunga nezenzo zesondo, kuphela emva kokuba benamava athile apho banokuthi babe ngabathandi abakhulu. Inqabile kakhulu ukuba a Gemini njengophawu loMoya, ukuba lusebenze kwaye lufumane indlela yokubonakalisa into abayifundileyo okanye abayivileyo kwindawo yokwenyani kunye nomzimba wenyama. Owona mgangatho wabo mkhulu kukukwazi ukufunda. Ngomnqweno wabo wokuba ngabathandi abakhulu, baya kufunxa ulwazi ngolwalamano lwabo ngalunye njengesipontshi.
IiGemini ezimbini kunye ziya kwabelana ngolwazi kwaye zilungelelanise amava abo angaphambili omnye komnye. Baya kwaneliseka ngakumbi xa befundisa iqabane labo into ethile, kunokuba baya kuba ngesondo ngokwalo. Ngeengqondo zabo ezivulekileyo kunye nobukrelekrele bokudala, mhlawumbi akukho ndawo enye abangayi kufuna ukulala nayo, okanye isikhundla abangafuniyo ukusizama. Akufani nokuba baziphatha kakubi, kodwa fumana uvuyo kunye nemincili kutshintsho lwendawo, ngakumbi ukuba kukho intshukumo ehambelanayo ebandakanyekayo, nayo. Ngoko khawube nomfanekiso-ngqondweni kaloliwe, indlu yangasese yenqwelo-moya okanye nayiphi na indlela yothutho ekunokwenzeka ukuba uzimele kuyo.
Nangona kunjalo, ubomi babo bokwabelana ngesondo bunokuba bungenanto xa imincili idlulile ukuba akukho namnye kubo onobunzulu obaneleyo bokuzisa kwisenzo sokwabelana ngesondo. Abaqondi nokuba kugxilwe kunye noqhagamshelo ngokweemvakalelo abaludingayo, de bafumane iqabane elifanelekileyo. Ngokuqhelekileyo oku akusiyo enye iGemini. Iintliziyo zabo kufuneka zigrunjwe kwaye ubudlelwane babo bobulili butshintshwe, ngaphambi kokuba bahlangane kunye nolunye uhlobo lwabo. Nayiphi na enye imeko mhlawumbi ayiyi kubagcina banelisekile ixesha elide.
IGemini kunye neGeminiThembela
Basenokungathembani, kodwa abakhathali ngokwenene. Bobabini bayazazi, ngoko ke kulula ukuqondana kuzo zonke ezomo zithambileyo, ezingaphaya kunye neziguquguqukayo. Ngokusisiseko omnye wabo uza kuhamba ngemizuzu emibini aze omnye abe mithathu, ngoko banokuthembana njani ukuba bahlale? Ukuba bebesazi inyathelo labo elilandelayo, basenokukwazi ukwakha ukuthembana nomntu ofana nabo. Le asiyonto iza kubakhathaza. Ngokuchasene noko, kuya kubanika inkululeko yokuba babe ngokwabo, kodwa kunqabile ukuba bahlale kubudlelwane ixesha elide.
IGemini kunye neGeminiUnxibelelwano kunye nengqondo
Unxibelelwano phakathi kweGemini kunye nenye iGemini ayipheli. Baza kuxhuma kwizivakalisi zomnye nomnye kwaye basebenzise zonke izixhobo zonxibelelwano ezinokwenzeka, ukuqala ngeencoko zesiqhelo zefowuni kunye nencoko eya kukhula ibe ziintlobo ezininzi zencoko, kuxhomekeke kwimvakalelo abafuna ukuyisebenzisa. Xa bedibene, kuhlala kukho into yokwabelana, ingcamango yokuba kuxoxwe kunye nomgama omele ukuwelwa ngeenyawo. Kumnandi ukubabukela kunye njengoko befumana umntu oqondayo nothetha ulwimi olufanayo. Ngethuba nje kukho intlonipho eyaneleyo kunye nokuphulaphula phakathi kwabo, icala lengqondo lobudlelwane babo liya kuba lilungile.
IGemini kunye neGeminiIimvakalelo
Uphawu lweGemini aluyiyo loo mvakalelo ukuqala. Into enhle kukuba bobabini bayayazi le nto kwaye bafumana inkcazo enengqiqo yenzuzo yokungabikho kovakalelo lwabo. Sekunjalo, kukho imfuneko kuye ngamnye wabo ukufikelela kwinto abangenakuba nayo. Kulindeleke ukuba iGemini ivuleke ngakumbi iya kwakha ubudlelwane obunzulu beemvakalelo kunye neqabane labo, nangona iimvakalelo zabo zisenokungabuyiswa.
Ekubeni bethembele kunxibelelwano lobukrelekrele nomntu, banokufumana ulwaneliseko lokwenene ngokweemvakalelo kunxibelelwano lwabo, kodwa oku konakala ngokulula ngenxa yesibakala sokuba ukufanelana ngokwasengqondweni akufani nokungokweemvakalelo, singasathethi ke ngokwesini. Ngokufuthi, baya kukukhanyela oku baze babambelele koko banako, de omnye wabo atshayelwe ezinyaweni ngumntu ovusa iimvakalelo zakhe ngokuthula.
IGemini kunye neGeminiImilinganiselo
Xa sisithi inkululeko sicinga ngo-Aquarius, kodwa eneneni uGemini uyayixabisa inkululeko kakhulu, ukuba akukho nangaphezulu kunomhlobo wabo we-Aquarius. Eli lixabiso iGemini ezimbini eziya kwabelana ngazo ngothando. Abakuthandi ukukruquka neenkcukacha ezidinisayo, iimbopheleleko zolwalamano olunentsingiselo, okanye imfuneko yeqabane labo lovelwano olungenakucelwa. Ingxaki isekubeni bacinga kakhulu, kwaye baziva bengaphantsi kakhulu. Ukuba banokuphuma entloko imizuzwana embalwa, banokuqonda ukuba isifuba sabo sikhalela ubuhlobo obusondeleyo, ukusondela kunye novelwano.
IGemini kunye neGeminiImisebenzi ekwabelwana ngayo
Esi sihloko sithetha yonke into. Babelana ngemisebenzi. Bonke. Ukuba enye yazo ifuna ukwenza… kakuhle ngokwesiseko nantoni na, enye iya kulandela ngenxa yokufun’ ukwazi okumsulwa, kwaye ngokuphendululekileyo. Nokuba bobabini bebengafuni ngokwenene ukwenza into, baya kuyenza bobabini kunye kuba befuna ukwazi. Emva kokuba babelane ngamava, baya kuyifaka kwisihluzo sengqondo, bathethe ngayo, baze badlulele kwelilandelayo. Inene akukho kunqandwa kwaba babini kwaye akukho bani unokubalandela ngathi banokulandelana.
Ubudlelwane phakathi kweeGemini ezimbini buya kunika ezinye iimpawu zezodiac intloko ephantse ibe yinto ethile. Baya kuhamba yonke indawo kunye, benze yonke into kunye kwaye bathethe ngayo yonke into omnye nomnye, ngokuphindaphindiweyo, de omnye wabo alahlekelwe ngumdla komnye. Ngenxa yendlela enokwenzeka yokujonga phezulu, kungcono ukuba sele benobudlelwane obunzulu ngaphambi kokuba badibane. Oku kunokubanika umgangatho wokuhlala kunye ixesha elingaphezu kweveki okanye ezimbini.
Kwiimeko ezininzi, olu asilulo ulwalamano abaya kufuna ukuhlala kulo, nangona ukuqondana kwabo kugqibelele. Kufana nokufana kakhulu, kwaye kwangaxeshanye ubudlelwane babantu abaninzi kakhulu. Ukuba ngamnye kubo akaqokelelwanga kumntu omnye, baya kufuna umntu okhoyo, ukubamba ibhalansi yabo kwaye angabavumeli ukuba bachithe. Kwimeko apho baye bakha ubuntu kwaye ngamnye kubo uyayiqonda intsingiselo yakhe yangaphakathi, banokuphila ngonaphakade kwaye bangaze basebenzise amandla onxibelelwano lwabo.
Umhlaza Emanzini Pisces Aries I-Scorpio
INkosazana (Iphepha) leKhadi leTarot yeeNdebe
Xa ILanga Lisiba Mnyama
Izilwanyana Zomoya kunye Nonyukayo Wakho
Ngo-2017 iScorpio Horoscope
Sagittarius kunye neSagittarius
Ulwazi Olupheleleyo Malunga Nokuvumisa Kweempawu Ze-Zodiac, Imihla, Amaxabiso Kunye Nokuhambelana.
Copyright © Onke Amalungelo Agciniwe | astrologartemis.com | Umthetho Wabucala